२४ घण्टामा ८८५ जनालाई कोरोना, काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ३०१ संक्रमित
घर स्वास्थ्य २४ घण्टामा ८८५ जनालाई कोरोना, काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ३०१ संक्रमित
१० भाद्र २०७७, बुधबार १६:४५
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ८८५ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार १३ हजार २५३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८८५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ३४ हजार ४१८ पुगेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा थप ३०१ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौंका २३० जना, भक्तपुरका २४ जना र ललितपुरका ४७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
१४ हजार ७३९ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । जसममध्ये ६ हजार २८ जना होम आइसोलेसनमा छन् भने ८ हजार ७११ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ३८५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै कोरोना जित्नेको संख्या १९ हजार ५०४ पुगेको छ । १४ हजार ७३९ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
जसममध्ये ६ हजार २८ जना होम आइसोलेसनमा छन् भने ८ हजार ७११ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । नेपालमा पीसीआर परीक्षणको कुल संख्या ६ लाख ३५ हजार २५२ पुगेको छ ।
अघिल्लो लेखसम्धीको नियुक्तिबारे ईश्वर पोखरेलले निकाले यस्तो विज्ञप्ति
अर्को लेख६० सहसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)